Iindaba -Imakethi ye-calcium chloride ye-anhydrous ikhe yanamava okukhula okumangalisayo kwiiyunithi zeshishini zabadlali abakhulu
Imakethi ye-calcium chloride powder engqina ukukhula okunamandla. I-Western Chemical Corporation igqibezela ukufunyanwa kwe-Anadarko Petroleum Corporation nge-US $ 55 yezigidigidi
I-calcium chloride isetyenziswa kakhulu xa kusenziwa iiplastiki, irabha kunye nezinye izinto zokugquma ngokufudumeleyo. Ingasetyenziselwa ukongeza okanye icandelo kwizinto ezahlukeneyo zeekhemikhali. Ingongezwa kwi-antifreeze, idizili, ipetroli, i-oyile yokwenziwa, ipeyinti, i-varnish, i-polyurethane, i-lubricants, i-sealants, i-pesticides kunye nezinye iimveliso. Nangona ezi mveliso zingadingi amaqondo obushushu aphezulu ukongeza okanye ukususa, kufuneka zigcinwe kwindawo engenamanzi kunye namaqondo obushushu aphezulu. Kutshanje, umzi mveliso wempahla eyolukiweyo unesidingo esomeleleyo se-calcium chloride powder. Ihlala isetyenziswa njengearhente yokulinganisa kunye nokulungiswa kwezisombululo ze-brine kwizixhobo zefriji. Kwiminyaka edlulileyo, nokuba kuqoqosho oluphuhlileyo okanye oluhlumayo, umzi mveliso wempahla eyolukiweyo uye waba ngomnye wemizi-mveliso ethembisayo ngokwexabiso nobungakanani. Ngokwedatha evela kwi-Indian Brand Equity Foundation (IBEF), imarike yase-India yamalaphu nezambatho yaxabiswa nge-US $ 100 yezigidigidi ngo-2019, kuqeshwe malunga nezigidi ezingama-45 zabasebenzi kwilizwe liphela. Ke ngoko, ezi zinto zinokukhuthaza ukukhula kweemarike ze-calcium chloride powder.
Fumana ikopi yesampulu yale ngxelo yentengiso @ https: //www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/1788
Ngokwendawo yokuma komhlaba, indawo yaseAsia-Pacific ibinemfuno ephezulu ye-anhydrous chloride powder iminyaka emininzi. Kungenxa yokuba imboni yemichiza ibikhula ngokuzinzileyo. Ukongeza, uMntla Melika wamkela inani elikhulu le-anhydrous chloride powder. Ukukhula okukhawulezayo kwecandelo lamayeza kunokukhuthaza ukukhula kweemarike zecoride yompu we-anhydrous powder kungekudala.
Kutshanje, ngoMeyi 2019, iWestern Chemical Corporation, umthengisi wase-US weemveliso zecalcium chloride, ufumene iAnadarko Petroleum nge-US $ 55 yezigidigidi.
I-calcium chloride powder yenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu kumalungiselelo e-calcium kwimizi mveliso eyahlukeneyo. Ifumaneka kwiimpuphu ezininzi eziqhelekileyo, ezinje nge-Epsom ityuwa, nemagniziyam sulphate, kunye netyuwa eliweni. Le ngxube ye powdery ineentlobo ezahlukeneyo zokusetyenziswa kwaye inokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo. Kwangokunjalo, amanye amashishini okuphela konyaka anje ngemveliso yeekhemikhali, amayeza, idayi, njl njl. Kumayeza, lo mgubo usetyenziswa ikakhulu njengendawo yokubambela i-electrolyte kunye ne-arhente echasayo. Ke ngoko, ezi zinto zilungileyo zinokukhuthaza ukukhula kwemarike ye-calcium chloride ye-anhydrous kungekudala.
Nangona kukho imfuno enkulu ye-anhydrous calcium chloride powder, ukugcinwa kwayo kufuna iimeko ezithile kuba inokufunxa ukufuma emoyeni kwaye iyiguqulele kwi-brine engamanzi. Ke ngoko, izikhongozeli ezikhethekileyo ziyafuneka ukugcina umgangatho wemveliso ngexesha lokugcinwa. Ke ngoko, obu bunzima buya kunciphisa ukukhula kwemarike ye-calcium chloride powder.
Ixesha lokuposa: Jul-30-2021